Fotodrafitrasa vaovao Md Kizito
Fitokanana ny Seminera Propedetika Provinsy Ekleziastika Atsimo Atsinanana
“Izay manan-tsofina aoka hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny Eglizy”Apok 2,7. Teny faneva manentana ny Seminera Propedetika vaovao. Toeram-panabeazana mamolavola tanora ho pretran’ny Eglizy.
Diosezy Fianarantsoa hankalaza jobily
150 taona amin’ny taona 2021 ny nidiran’ny finoana katolika teto Fianarantsoa
Vokatry ny fahatokisana an’i Masina Maria ny nanombohan’ny finoana teto Fianarantsoa. Ho fiomanana amin’izany ny dia mivavaka telo taona nibanjinana ny fiainan’i Masina Maria sy i Md Josefa ary i Jesoa zaza tinaiza.
« Ity tany ity fandalovam-bahiny… ».
« Noharîn’Andriamanitra ho sambatra sy masina isika »